विनय तामाङ र अनित थापाले नवान्नमा घुँडा टेकेर विमल गुरूङलाई जङ्गल पठाउने षड्यन्त्र गरेका हुन्: विमलपन्थी विमो – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsविनय तामाङ र अनित थापाले नवान्नमा घुँडा टेकेर विमल गुरूङलाई जङ्गल पठाउने षड्यन्त्र गरेका हुन्: विमलपन्थी विमो
विनय तामाङ र अनित थापाले नवान्नमा घुँडा टेकेर विमल गुरूङलाई जङ्गल पठाउने षड्यन्त्र गरेका हुन्: विमलपन्थी विमो
November 13, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, दार्जीलिङ 0
7 अक्टोबर 2007-मा विमल गुरूङद्वारा गठन गरिएको पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटै लक्ष्य हो गोर्खाल्यान्ड। 2007-देखि विमल गुरूङ केन्द्रमाथि गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको लागि चाप दिने कार्य गरिरहेका छन् भने यसको लागि वर्ष 2017-18 सही साथै उचित छ।
केन्द्र सरकारले अहिले राज्य सरकारमाथि त्रिपक्षीय वार्ताको लागि चाप दिइरहेको छ। यसको लागि गृह मन्त्रालयबाट राज्य सरकार अनि गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङलाई पत्रचार गर्ने पहल गरेको छ, यसलाई गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाले स्वागत जनाएको विद्यार्थी मोर्चाका सहसचिव अनमोल थापाले एक विज्ञप्तिमार्फत बताएका छन्।
उनले यसको लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह अनि सांसद एसएस अहलुवालियालाई धन्यवाद दिएका छन्। गत जून महीनादेखि गणतान्त्रिक ढङ्गमा थालिएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको उद्देश्य गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको निम्ति केन्द्र र राज्यले त्रिपक्षीय वार्ता डाक्नुपर्छ भन्ने थियो भने केन्द्रले यसको लागि पहल गरिरहेको छ, तर राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागिरहेकी छन्। यो उचित होइन।
भारतको संघीय ढाँचालाई सम्मान गरेर मुख्यमन्त्रीले पनि त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति स्वीकृति प्रदान गर्दै यसको लागि तयार हुनपर्छ। आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मुख्यमन्त्रीलाई वार्ताबाट विमुख बनाउने काम पहाड़कै मौकावादी बिकाऊ नेताहरूले गरेका हुन्। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन र बन्दको 90 दिन नपुग्दै आफै राज्य सरकारलाई पत्रचार गरेर नवान्नमा घुँड़ा टेक्न पुग्नेहरूको कारणनै राज्यको टाउको हलुका भएको हो।
उनले विज्ञप्तिमा अझै भनेका छन्-अहिले जति पनि गणतन्त्र खोज्दै विनय र अनितको खेमामा जाँदैछन्, उनीहरू सबै आत्मसम्मान नभएका, गणतन्त्रको ग पनि नजान्ने पट् मूर्ख अनि मौकावादीहरू हुन्। उनीहरूलाई अवश्यै समयले सजाय दिनेछ। उचित समय आएपछि पासा पल्टिनेछ अनि उनीहरू घरको न घाटको हुनेछन्। उनीहरू आफ्नै स्वाभिमान बेच्नेहरू हुन्। के उनीहरूलाई गणतन्त्रको परिभाषा थाह छ? बरू सोझै कन्ट्र्याक्टको लागि गएको भन्न सक्नुपर्छ।
उनीहरूले आफूलाई कसरी लिडर सम्झिन्छन्? आज जसले घरमा पुलिस र गुन्डा लगाएर घर तोड़फोड़ र आगो लगाउने काम गर्न लगाउँदैछन्, त्यसै गुट्मा गएर फेरि कुन मुखले गणतन्त्रको कुरा गरिरहेछन्? गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी विमल गुरूङले7अक्टोबर 2007-मा गोर्खाल्यान्ड राज्य प्राप्तिको उद्देश्यले खोलेका हुन्। विमल गुरूङ यस मुद्दाप्रति इमान्दार छन्। तर कसरी उनीहरूले राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसँग मिलेर विमल गुरूङको झण्डा र पार्टीको नाम अवैध तरिकाले चलाइरहेका छन्? बंगालको कुर्सी सम्हालेर कुन मुखले गोर्खाल्यान्ड भनिरहेका छन्? पार्टीको नाम र झण्डा दुरूपयोग गरिएकोमा समय आएपछि अदालतको ढोका ढक्ढकाउने पनि उनले चेताउनी दिएका छन्।
एउटा पार्टी खोल्न नसक्ने र एउटा झण्डा बनाउन नसक्नेले के राजनीति गर्छन्? विनय तामाङ र अनित थापाले नवान्नमा घुँडा टेकेर विमल गुरूङलाई जंगल पठाउने षड्यन्त्र गरे अनि अहिले बंगालको सुरक्षामा हिँडिरहेका छन्। यति जान्दा जान्दै विनय गुटमा जानेहरूलाई के-को लागि गएका हुन् भन्नु? हामीले सहेर बसेका छौं। यो हाम्रो लागि तपस्या हो, लक्ष्य अब टाडो छैन, थापाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
सम्मान भत्ता बढ़ाइदेऊः आईसीडीएस कर्मचारीवर्ग